Udo, Oyi na Sublimation | Network Meteorology
Mgbe ikuku dị jụụ na-ajụ oyi n'okpuru ebe igirigi, mmiri alụlụ mmiri na-akụkọta odide nuclei dị n'ime ikuku. Nuklia ndia na enwe mgbe ha na ndi ozo di nkpa na mmiri, ya mere ana akpo ha hygroscopic. Ngwurugwu nnu sitere na mmiri mmiri na-adaba na nke a ma nwee ike ibute odide tupu iru mmiri ahụ ruru 100 pasent.
N’ime ikuku, ụfọdụ irighiri ihe ndị a kwụsịtụrụ nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ihe dị n’ime usoro nke juruoyi. A urughuru nke na-akpata uto nke ice kristal gburugburu ya site na-na submerged mmiri a ifriizi isi.
Alụlụụ mmiri nwekwara ike ịgbanwe kristal akụrụngwa na-enweghị agafe mmiri mmiri. Ọ bụ sublimation, okwu a na-etinyekwa iji gosipụta mgbanwe ntụgharị, ya bụ, site na ice ruo vepo mmiri. Ngwurugwu ọ bụla nwere ike ịmepụta kristal ice site na sublimation bụ isi sublimation. N'agbanyeghị ọtụtụ ahụmịhe, enwebeghị ike igosipụta na e nwere sublimation nuclei ndị ọzọ karịa ikuku igwe na ikuku.
Iberibe ihe nkiri nke mmiri na-ebu ụzọ pụta n’elu ala wee kpụkọta akpụkọta. Ihe nkiri a dị obere nke na ọ siri ike ịhụ ịdị adị nke mmiri ahụ, yabụ, ọ dị ka ihe niile ọ na - eme dịka a kpụrụ kristal ice ozugbo site na mmiri mmiri. N'ihi ya, a na-ejikarị okwu igwe okwu bụ "isi friji" eme ihe na ihu igwe maka nuclei niile na-eme ka akpụ ice.
Ọtụtụ n'ime kefriza cores o nwere ike ịbụ na ha si n’ala, bụ nke ifufe na-ewepụta ụfọdụ irighiri ihe. O yiri ka ụfọdụ ụrọ ụrọ na-arụ ọrụ dị mkpa na ọ ga-abụ na ngwakọta ọgba aghara nwere ike inye ha nkesa dị nha ruo oke dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Udọn, oyi na sublimation
Igwe Igwe dijo
Kedụ ka a ga-esi kọwaa ebe odide na nzuzo na sublimation?